သတ္တုရောစပ်အမြီးဓာတ်ငွေ့ထိန်းချုပ်မှု (စစ်ဆင်ရေး) လိုင်း China Manufacturer
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: သတ္တုရောစပ်အမြီးဂတ်စ်,သတ္တုရောစပ်အမြီးဂတ်စ်ထိန်းချုပ်ရေးလိုင်း,သတ္တုရောစပ်ဖုန်ကောက်ခံရေး
Home > ထုတ်ကုန်များ > လူပျိုစက်ဖုန်ကောက်ခံရေး > သတ္တုရောစပ်အမြီးဓာတ်ငွေ့ထိန်းချုပ်မှု (စစ်ဆင်ရေး) လိုင်း
သတ္တုရောစပ်အမြီးဓာတ်ငွေ့ထိန်းချုပ်မှု (စစ်ဆင်ရေး) လိုင်း
 သတ္တုရောစပ်အမြီးဓာတ်ငွေ့ထိန်းချုပ်မှု (စစ်ဆင်ရေး) လိုင်း
ရန်စုဝေးပါးပျဉ်းချမှတ်, 1. အကြီးစားအရပ်ရပ်တို့၌ကွဲပြားရောစပ်ပစ္စည်းကိရိယာများ: သတ္တုရောစပ်နည်းလမ်းနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုပမာဏအကြားကွာခြားချက်အရ, သတ္တုရောစပ်၏အိပ်ဇောထိန်းချုပ်မှု (စစ်ဆင်ရေး) လိုင်း၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှစ်ခုပုံစံများသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည် မီးခိုးများနှင့်ဖုန်မှုန့်အခန်းထဲကစုဆောင်းကိုစုသိမ်း - လျှော့ချ (ဖုန်မှုန့်) အမြန်နှုန်း, ဖုန်မှုန့်လျှော့ချရေး, ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖုန်မှုန့်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိုလေပေါ်မှာပ - ကဆင်း (မီးခိုးနှင့်ဖုန်မှုန့်) အပူချိန်, deacid, flue ဓာတ်ငွေ့ Deodorization, ဖုန်မှုန့်ကိုရေခွဲခြာ, ရေ (အာရုံစူးစိုက်မှု) ကုသမှုနှင့်စုဆောင်းခြင်း (ပြန်လည်); ပါးပျဉ်းမီးခိုးစုရုံးစုဆောင်းခြင်းအပါအဝင် 2. အသေးစားဗဟိုမိုက်မီးဖို, ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေး, မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေး, deacid, deodorization, ဖုန်မှုန့်ကိုရေခွဲခြာ, ရေ (အာရုံစူးစိုက်မှု) ကုသမှုနှင့်စုဆောင်းခြင်း (နာလန်ထူ) ကိုလေပေါ်မှာပ။
လုပ်ဆောင်ချက်၏နိယာမအရ, duster အောက်ပါအချက်များကိုသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်:
1. အပူပိုင်းအမျိုးအစားစက်မှုမြေမှုန့် remover အဓိကအားဖြင့်ဖုန်မှုန့် inertia အရေးယူမှုနှင့်ဆွဲငင်အားအရေးယူမှုနှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့်ထိုကဲ့သို့သောဒါအပေါ်ခန်းအစွမ်းမဲ့ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း, ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်းနှင့်ဖြေရှင်းအဖြစ်မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးပစ္စည်းကိရိယာများ, ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်မြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုကြမ်းအမှုန်အရွယ်အစားဖုန်မှုန့်များ၏ခွဲခြာသို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့ကိုအသုံးပြုသည်။
2. စိုစွတ်မြေမှုန့် remover ဖုန်မှုန့်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုမှုန်ရေမွှားမျှော်စင်, scrubber, သက်ရောက်မှုဖုန်မှုန့်စုဆောင်းနှင့် Venturi ပြွန်, အဖြစ်အမှုန်, ထုတ်လုပ်မှု processing ၏လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်မြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဖုန်မှုန့်ဓါတ်ငွေ့၏ကြီးမားသောလေကြောင်းအသံအတိုးအကျယ်ခွဲခြားနှင့်ဖမ်းယူဖို့ရေပါဝါပေါ်နေကြသည်မှီခို ပိုပြီးအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါထူ hydrophilic ဖုန်မှုန့်များ၏ခွဲခြာထိရောက်မှုခြောက်သွေ့အမျိုးအစားစက်မှုမြေမှုန့်စုဆောင်း၏ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
3, granular အိပ်ရာဖုန်မှုန့် remover ဓာတ်ငွေ့ဖြေရှင်းချက်တွင်ပါရှိသောမြေမှုန့် filtering များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများပိတ်ဆို့ဖို့ filter ကိုပစ္စည်းအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအမှုန်အရွယ်အစားပစ္စည်းစုဆောင်းခြင်းအလွှာအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအဓိကအားဒါပေါ်မှာအဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, သတ္တုဗေဒနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်တွင်ဖုန်မှုန့်ဥတုအချက်များကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာမကြာခဏမြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှု, ကြမ်းမှုန်များနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်များဖုန်မှုန့်စစ်ထုတ်ပေးပါတယ်။
4. အိတ် filter က filter ကို medium အဖြစ်ဖိုင်ဘာထည်သို့မဟုတ်အဆာအလွှာအသုံးပြုတဲ့ dedusting ကိရိယာဖြစ်သည်။ ဒါဟာအသုံးပြုမှု, ပုံစံ, ဖုန်မှုန့်အရွယ်အစားနှင့်ထိရောက်မှု၏ကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာသောအိပ်ဇောမြေမှုန့်စုစည်းစနစ်နှင့်လေကောင်းလေဝင်ပေါက်စနစ်ဖြစ်ပါသည်, ဒဏ်ငွေဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏အရပျ၌အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ကြောင့်သီးသန့်စစ်ထုတ်ရန်ကုန်ကြမ်းသစ်အမျိုးအစား၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏, ဖိုင်ဘာ filtering ကိုနည်းပညာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်းထုတ်ကုန်အသစ်တွေပေါ်လာဖို့ဆက်ပြီးနှင့်လျှောက်လွှာကိုလယ်ခွံ့ပြုသည်သည်အရှိန်သိရသည်။
5. electrostatic မိုးရွာသွန်းမှုဟာ electrostatic field ထဲသို့ဖုန်မှုန့်လေကောင်းလေမိတ်ဆက်တဲ့ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသည်။ အမြင့်ဆုံးသောဗို့အားလျှပ်စစ် field ရဲ့အရေးယူမှုအောက်, ဓာတ်ငွေ့ ionized နှင့်အီလက်ထရွန်များနှင့်အပြုသဘောအိုင်းယွန်းထုတ်လုပ်နေသည်။ သူတို့ကအသီးသီးအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောထမ်းဘိုးကိုပြောင်းရွှေ့။ မြေမှုန့်မှုန်အလုပ်လုပ်လျှပ်စစ်လယ်ကွင်းမှတဆင့်စီးဆင်းသည့်အခါသူတို့ကအနုတ်တာဝန်ခံ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ရန်သေချာသောအလျင်မှာစွဲချက်တင်နေကြသည်။ အဆိုပါပြားကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ရှိအခြေချ, အရှင် airstream ကနေဖယ်ရှားနှင့် electrostatic မိုးရွာသွန်းမှုအတွက်စုဆောင်းလျက်ရှိသည်။ မြေမှုန့်စုဆောင်းမြင့်မားတဲ့ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးထိရောက်မှုနိမ့်ခုခံနှင့်အဆင်ပြေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏အားသာချက်များရှိပါသည်။ ဒါဟာဒဏ်ငွေဖုန်မှုန့်အမှုန်စုဆောင်းအတွက်အိတ် filter ကိုကဲ့သို့တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ndustrial အိတ်အမျိုးအစားဘိလပ်မြေမြေမှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Related Products List: သတ္တုရောစပ်အမြီးဂတ်စ် , သတ္တုရောစပ်အမြီးဂတ်စ်ထိန်းချုပ်ရေးလိုင်း , သတ္တုရောစပ်ဖုန်ကောက်ခံရေး , စက်မှုကျောက်မီးသွေး Pulverizer , မြှေးရော်ဘာမြှေး , တယ်လီစကုပ်ဖုန်အိတ်အမျိုးမျိုး , သတ္တုရိုင်းအပူအရည်ကျိုမီးဖိုပစ္စည်း , ကြေးနီရောစပ်ဖုန်ကောက်ခံရေး